OnePlus Bullets V2, headphone tsara, tsara sy mora | Androidsis
OnePlus Bullets V2, headphone tsara, tsara ary mora vidy
Tahaka ireo orinasa maro hafa fiaviana sinoa, ny OnePlus dia efa nampiasainay tamin'ny fanolorana vokatra tsara amin'ny vidiny ambany lavitra ny fifaninanana. Miresaka momba ny finday avo lenta isika, fa koa momba ny batterie ivelany, fonony, trano ...
Ankehitriny ny orinasa dia mandefa ny sasany headphones vaovao, ny OnePlus Bullets V2 izay misongadina amin'ny famolavolana tsara, kalitao tsara ary ny vidin'ny fifaninanana.
Toy izany koa ny OnePlus Bullets V2
Omaly, ny mpanamboatra sinoa OnePlus dia nanolotra tamin'ny alàlan'ny famoahana horonantsary iray tao amin'ny fantsona YouTube azy ny taranaka faharoa amin'ny headset Bullet, OnePlus Bullets V2.
Ireo kabary vaovao dia hampahatsiahy anao betsaka ireo natolotry ny iray amin'ireo mpifaninana aminy akaiky, Xiaomi. Ary marina indrindra fa tonga hifaninana mivantana amin'ireo izy ireo.
Ny sasany amin'ny OnePlus Bullets V2 dia misy vitsivitsy sofina an-tsofina izay voafetra 14 grama fotsiny ny lanjany. Namboarina anaty izy ireo alim-pito nopetahany sosona varahina amin'ny loko roa samy hafa, ny volamena misy tariby fotsy ary grafita misy tariby mainty. Ny hevitra dia ny fanambadian'izy ireo tanteraka miaraka amin'ny famaranana roa an'ny smartphone OnePlus 3.
Ao amin'izy ireo, ny diaphragm, vita amin'ny polyarylate, dia miavaka indrindra. Manolotra haavon'ny tsindry feo an'ny 106 dB miaraka amin'ny elanelam-potoana eo anelanelan'ny 20 sy 20.000 Hz. Raha ny tsy fahalavorariany dia 24 ohm ity.
Amin'izao fotoana izao OnePlus dia tsy sahy naka ny dingana mankany USB-C ary noho izany, ny OnePlus Bullets V2 dia manana Jack plug 3.5mm Nentim-paharazana.
Ny tariby, manana halavirana 1,25 metatra, dia mampifandray ny fanaraha-maso izay ahafahantsika mandroso sy miverina eo anelanelan'ny hira, miato ary milalao, mampitombo sy mampihena ny feony ary mamaly ny antso an-tariby, satria mampiditra mikrô ihany koa izy io.
Araka ny efa nampoiziko, ny iray amin'ireo manintona azy lehibe indrindra dia ny vidiny, 19,95 euro ihany. Afaka mahazo izy ireo amin'ny alàlan'ny tranokala ofisialiny na dia amin'izao fotoana izao aza, tsy fantatray ny daty namoahana marina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » OnePlus Bullets V2, headphone tsara, tsara ary mora vidy
HTC Desire 10 Pro Famaritana mivoaka; manambara fitaovana faneva